30 Lo’aad oo maanta Oramadu ku dhacday duleedka Tulliguuleed – Radio Daljir
30 Lo’aad oo maanta Oramadu ku dhacday duleedka Tulliguuleed
Agoosto 30, 2019 7:45 g 0
Lo’ dhan 30 neef oo saaka daaqaya beeraha duleedka degmada Tulliguuleed ayaa waxaa kaxaystay oo dhacay maleeshiyaadka Oromada ee sida joogtada ah weerarka ugu haysa deegaanka. Maleeshiyaadka ayaa ka soo dulay degmada Jinacsani ee kililka Oromiya.
Xoolaha la dhacay ayaa Radio Daljir tiradoodu loogu sheegay in ay dhanyihiin 30 neef oo lo’ ah.
Dadka xoolaha laga dhacay oo u dacwooday ciidamada milatariga Itoobiya ee dhawaan soo degay Tulliguuleed ayaan wax tixgelin ah siin codsiga dadka xoolaha laga dhacay, wax dabaggal ahna aan ku sameyn dadka xoolaha dhacay.
Ciidamada militariga Itoobiya oo ay ka soo hormareen maleeshiyaadka Oramada oo weerar ahaa ayaa dhawaan soo degay degmada Tulliguuleed. Shacabka deegaanka ayaa militariga ku eedeynaya in ay garab siinayaan maleeshiyaadka Oramada.
Tan iyo sidii Lemma Megersa loogu magacaabay Wasiirka Difaaca Itoobiya ayaa waxaa isa soo tarayey weerarka iyo barakicinta lagu hayo Soomaalida Kililka ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS). Lemme Megersa ayaa hore u ahaan jiray Madaxweynaha Oromia, waxaana u ku soo caanbaxay siyaasadiisa la dagaalanka iyo barakicinta Soomaalida.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 204 Wararka 19761
MAANHADAL: Xorriyadda Sanaag iyo Xaalka Sool (dhegayso|daawo)